'Lubbuu Mooyyaleetti darbaa jiruuf ammallee xiyyeeffannaan federaalaa hin kennamne' - BBC News Afaan Oromoo
'Lubbuu Mooyyaleetti darbaa jiruuf ammallee xiyyeeffannaan federaalaa hin kennamne'
17 Elba 2018
Walitti bu'insa Mooyyaleetti uumameen bombiin dho'een lakkoofsi namoota ajjeefamanii afur gahuu isaa itti-gaafatamaan kominikeeshinii godina Booranaa Obbo Galmaa Boruu himan.
Duratti itti-aanaa hogganaan Waajjira Fayyaa Aanaa Mooyyalee Obbo Hurukkaa Godaanaa, namoonni miidhamanii mana yaalaa jiran gara 63 ni ta'u jedhan.
Obbo Hurukkaan namoota madaa'an kana hospitaalota Shaashamannee, Walaayitaa Sooddoo, Yaaballoo, Bulee Horaatti akka dabarfaman dubbachuun, kanneen biroos ammallee gara hospitaalaatti barraa'uuf akka danda'u himanii ture.
Booda kana Itti-gaafatamaa waajjira Kominikeeshinii godina Booranaa irraa akka odeeffannetti ammoo namoonni ajjeefaman afur gahaniiru.
Sababa waldhabdee rakkoo kanaa yaada waldhiitutu jira.
Akka jiraattonni magaalaa Mooyyalee jedhanitti, walitti bu'insa uumametti aansuun boombii naannoo buufata konkolaataa Mooyyaleetti dho'een namoonni ajjeefamanii kaan immoo madaa'an.
Akka itti aanaan itti gaafatamaa Waajjira Fayyaa Mooyyalee jedhanitti sababiin Poolisoota addaatu [Poolisii Addaa Somaaleetu] boombii dhoose.
Obbo Galma Boruun garuu dhimmi kun kan eegale magaaluma Mooyyaleetti waajjira bulchiinsaa fi mana murtii ijaaruuf wayita yaaliin taasifametti jedhan.
Gama Somaaletin ijaarsa kan dhaabsisuudhaaf yaalii wayita godhanitti waldhabdeen gidduutti uumame. Dargaggooleenis dhagaa walitti darbatu eegalani. Kanuma gidduuttis boombiin darbatame jedhan.
Jiraataan Mooyyalee dhalootaan Soomalee kan ta'e yeroo dubbatu immoo bulchiinsi Oromiyaa hojii ijaarsa babal'isuu yeroo hojjetu rakkoon kuni mudate jechuun sababa bombiin harka poolisii Oromiyaa jiru dho'ef isaanitu itti gaafatamu qaba jedhu.
Jiraataan kana haa jedhan malee jiraattonni kaaniifi hoggantonni mootummaa garuu humna poolisii addaa Somaaleeti kana godhe jedhu.
Akka Itti gaafatamaa waajira komunikeeshinii Godina Moyaalee Aab Galmaa Boruutti waajira bulchiinsaafi mana murtii aanaa kan duraan ture dallaa isaa sirreessuudhaaf uummanni ijaarsaaf dhagaa walitti guure. Waytuma kana hin hijaariinaa jedhanii jeequmsi ka'e akka aanga'aa kanaatti.
"Haala ture kana dubbatanii tasgabbeessuuf wayita hojjetame [isaan] haala gaariirra hin turre. Isaan duraanuu ganamarraa eegalanii qophiirra turan. Isaan warruma hidhatetis nama haadha jira. Ganamarraa ka'anii odeeffannoo waan qabaniif warri naannoo shanii kun suuqii hin bananne qophii waraanaarra turan jechuudha."
Akka Aab Galmaatti hanga ammaatti maree qondaalota waraanaafi Oromiyaa waliin taasifamee ture malee waanti taasifame hin jiru. Akka aanga'aa kanaatti, qaamni mootummaa federaalaa dhimma lubbuu namootaa dabarsaa jiruu, mana gubachaa jiruufi qabeenya manca'aa jiru kanaaf furmaata kan ta'u fala kennaa hin jiru. "Dhimma kanaaf xiyyeeffannaan kennamee furmaaa hin jiru."
Torbeewwan muraasa dura magaalaa Mooyyaleetti humnoota mootummaatiin haleellaa raawwatameen namoonni 10 ol ajjeefamun kuma hedduutti kan ta'an daangaaa ce'uun baqachuun isaanii ni yaadatama.
''Kaleessa Moyaaleetti namoonni ajjeefaman, kuun madaa'an''
23 Amajjii 2018
Dubartoota Booranaa Keeniyaatti baqatan keessaa jaha dahan
16 Bitooteessa 2018
Mooyaalee: "Niitiin tokko dhirsa lamaan hin bultu"
5 Muddee 2017
MM Abiy Giddugala Aadaa Oromoo Salaalee eebbisiisuufi
UK'n ministirri muummee haaraa dhuma Adoolessaa filatti
Indiyaattii ibiddi daree barnootaatti qabate barattoota 19 galaafate
'Haaromsaaf ariitiin hin barbaachisu'
Sookoofi soorgoo diraamaa 'Min Littaazaz'
Qonnaan bultoota warshaa sukkaara Wanjii bitachuu barbaadan